Global Voices teny Malagasy · 20 Novambra 2012
Tantara tamin'ny 20 Novambra 2012
Mahavaky fo ny mahita ny sarin'ireo ankizy Palestiniana namoy ainy izay niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao sosialy androany, ho fanaraina ny saina manoloana ny voina miseho amin'izao fotoana izao ao Gaza, satria mbola manohy mifampitifitra foana i Isiraely sy ny Hamas. Androany no andro fahadimy hatramin'ny fandarohana baomba nataon'i Isiraely ao Gaza...
Manohitra Ny Ady Miaramila Atao Ao Gaza ny Isiraeliana
Nanentana ireo Isiraeliana an-jatony ny vondrona Facebook omaly mba ho tonga hanao fihetsiketsehana ao amin'ny kianjan'i Tel Aviv, Habima. Niantso ireo vahoaka ny vondrona mba “Hanohitra ny ady noho ny fifidianana! Handà ny ho faty na hovonoina noho ny antony ara-politika.” Nanomboka tamin'ny 14 Novambra teo ny fifampitifirana teo amin'i Hamas sy...
Eoropa Afovoany & Atsinanana20 Novambra 2012
Maoritania: Avadiky ny Mpampianatra Korano ho Mpangataka ny Ankizy Madinika
Hahita ankizy fantatra amin'ny hoe Al Mudat ianao eo amin'ny salan-taona 4 - hatramin'ny 14 taona, mangata-bola, ianao manerana ny renivohitra Maoritaniana Nouakchott. Tsy mangataka vola hoan'ny tenany ireo ankizy ireo - ny mifanohitra amin'izany aza, ilain'izy ireo ilay vola hanaramàna ny mpampianatra Korano.